डा. गोविन्द केसीको चेतावनी – राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त नगरे अनसन बस्छु – Health Post Nepal
डा. गोविन्द केसीको चेतावनी – राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त नगरे अनसन बस्छु
२०७८ भदौ २१ गते १५:११
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले सरकारले विवादित राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई हालसम्म पनि पदमुक्त नगरेकाले भन्दै कुनै पनि बेला अनसन सुरु गर्ने बताएका छन्।
‘स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने लगायतका हामीसँग भएका समझदारीका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्दछौं। यी मागहरु पूरा नगरी सरकारले अहिलेकै निष्क्रियता, लाचारी र अनियमितता कायम राखेमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
डा.केसीले बीपी प्रतिष्ठानका हकमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन लगायत आफूहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले समझदारी गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि त्यस तर्फ कुनै काम नभएको बताएका छन्।
‘माफियाहरुको स्वार्थमा बारम्बार चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएर आयोगको आकस्मिक बैठक बोलाउने प्रयास गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त भएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई अहिलेसम्म पदबाट हटाइएको छैन । यसबाट सरकार मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि झनै बल्झाउने दिशामा गएको देखिन्छ,’ डा. केसी भन्छन्।
डा. केसीले बीपी प्रतिष्ठानको आन्दोलनको पहिलो चरण टुंग्याउने बेला भएको सहमति तथा आफूहरुसंग प्रधानमन्त्रीले गरेका स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिका नयाँ मापदण्ड बनाउने लगायतका पाँच बुँदे समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि हामी गत एक दशकदेखि निरन्तर संघर्षमा छौं । यसबीच बारम्बार सरकारले हामीहरुसित सम्झौता गरे पनि तिनको इमान्दार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानमा चलेको आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरुसित भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारण अस्पतालको सेवा नै अवरुद्ध हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । साथै बीपी प्रतिष्ठानका हकमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन लगायत हामीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले समझदारी गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि त्यस अनुसार कुनै काम भएको छैन । उल्टै माफियाहरुको स्वार्थमा बारम्बार चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएर आयोगको आकस्मिक बैठक बोलाउने प्रयास गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त भएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई अहिलेसम्म पदबाट हटाइएको छैन । यसबाट सरकार मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि झनै बल्झाउने दिशामा गएको देखिन्छ ।
यो अवस्थामा अहिलेको सत्तामा रहेका पार्टी, तिनका नेता तथा नेताका परिवारका सदस्यहरुसित साँठगाँठ रहेका तथा आपराधिक पृष्ठभुमिका माफियाहरुले देशभरका निजी मेडिकल कलेजहरु किनिरहेका छन् । त्यस्तो किनबेचले राजनीतिकर्मीहरुले भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको कालो धन माफियाहरुमार्फत मेडिकल कलेजमा लगानी भइरहेको भन्ने आशंकालाई गम्भीर बल पु¥याएको छ । नागरिकले लाखको कारोबार गर्दा स्रोत खोज्ने राज्य र बैंकिङ प्रणाली अरबौं रुपैयाँको यस्तो शंकास्पद किनबेच भइरहँदा मौन बस्नुले थप शंका जन्माएको छ । साथै मेडिकल कलेज खरिदबिक्रीका क्रममा भएका करार उल्लंधन लगायतका अन्य खालका अनियमितताहरु र त्यसका कारण राज्यलाई पर्न गएको क्षतिबारे पनि बारम्बार मिडियामा समाचारहरु आएका छन् । २०८५ सालपछि कानुनतः मेडिकल कलेजहरु गैर नाफामुलक हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसको कार्यान्वयन तयारी गर्नुको बदला सत्तारुढ दलका नेताहरु तथा तिनका परिवारका सदस्यले अरबौंको कालो धन मेडिकल शिक्षामा खन्याइरहेको देखिन्छ ।
यस्तो अनैतिक र अवैध कामको तत्काल रोकेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आम्दानीको पारदर्शी स्रोतविना शंकास्पद रुपमा अरबौंमा मेडिकल कलेज किन्नेहरुको सम्पत्तिमाथि तत्काल छानविन गरोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छौं । यदि त्यसो नगर्ने हो भने भ्रष्ट, अपराधी र माफियाहरुको अहिलेको सरकारसितको साँठगाँठ पुष्टि हुनेछ । त्यो अवस्थामा माफियाहरुमार्फत कालो धन मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने नेताहरुको नामै तोकेर आन्दोलनमा उत्रिन हामी बाध्य हुनेछौं ।
हाल अदालतमा चलिरहेका मेडिकल शिक्षासम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित अदालतले मेडिकल शिक्षाको संवेदनशीलता र सुधारको प्रयासलाई समेत आत्मसात गरेर न्याय दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
साथै बीपी प्रतिष्ठानको आन्दोलनको पहिलो चरण टुंग्याउने बेला भएको सहमति तथा हामीसित प्रधानमन्त्रीले गरेका स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिका नयाँ मापदण्ड बनाउने लगायतका पाँच बुँदे समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा विभिन्न स्वार्थ समुहहरुको तर्फबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नाजायज दबाब नदिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने लगायतका हामीसँग भएका समझदारीका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्दर्छौं । यी मागहरु पूरा नगरी सरकारले अहिलेकै निष्क्रियता, लाचारी र अनियमितता कायम राखेमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।
काठमाडौं, २०७८। ५।२१
One thought on “डा. गोविन्द केसीको चेतावनी – राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त नगरे अनसन बस्छु”
खगराज अधिकारी, राम जनाम चौधरी , गगन थापा, गिरि राजमणि पोखरेल , उपेन्द्र यादव, भानु भक्त ढकाल , हृदयेश त्रिपाठी. यी माथि उल्लेखित मानिसहरु ब्यापार, राजनीतिक, आफ्नो मान्छे, पृष्ठभूमि बाट जो कुनै स्वास्थ्यको कुनै ज्ञान छैन नियुक्त गरीएको होइन र? तर उनीहरु संग कुनै समस्या थिएन त ! अब मात्र किन ? हुन् त यो मन्त्रि हामि संग न चिनजान न लेनदेन छ, किन यो बुढो covidiot मानिस यस व्यक्ति को पछि लागिरहेको छ ? यो व्यक्तिगत प्रतिशोध हो वा रिसइभि । यदि उ एक स्पष्ट दिमाग, स्पष्ट विवेक छ, र साँच्चै आफ्नो वचन मा अडिग छ भने, तब किन उनको संस्थानमा अझै पनी आज सम्म एक धेरै कनिष्ठ व्यक्ति डीनको पोस्ट मा छ ? के उनको माग एक वरिष्ठ व्यक्ति डीन हुनु पर्छ भन्ने माग, मानक थियो होइन र ? जहा सम्म सबैलाई यादनै हुनु पर्छ ! येस्तो दुइ जिब्रे सर्पो कहा बाट जन्म लिई आयो को होला ? ये राते मकै !!! उ आफ्नो घर पनि सुधार्न सक्नुहुन्न, किन अरुको घर मा नाक घुसाउन जान्छ ?? यस प्रकारको धम्की र वायियात धम्कीले मात्र उसलाई हानी पुर्याइरहेको हुन्छ राम्रो हुनु सट्टा !